UGREEN HiTune X6: écouteur manafoana tabataba amin'ny €40,49 fotsiny | avy amin'ny mac aho
UGREEN HiTune X6: écouteur manafoana ny tabataba amin'ny €40,49 fotsiny
Ignatius Room | | maro
Rehefa miantsena amin'ny écouteur tsy misy tariby, ny isan'ny safidy azo alaina eny an-tsena amin'izao fotoana izao avo dia avo izy io, raha mbola tsy mandeha amin'ny fividianana ny modely AirPods samihafa omen'i Apple ho antsika ny safidy.
Raha tsy mamela izany ny paosinao na reraka amin'ny fahaverezan'ny AirPods ianao, avy amin'ny iPhone News dia manolotra safidy mahaliana anao izahay. Ny UGREEN HiTune X6, écouteur manala tabataba Inona no hitantsika ao amin'ny Amazon ho an'ny € 40,49 raha manararaotra ny tolotra asehoy anao amin'ity lahatsoratra ity izahay manomboka ny 17 ka hatramin’ny 23 janoary amin’ity volana ity, satria ny vidiny mahazatra dia 59,90 euro.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ity mpanamboatra ity ianao dia manasa anao hanohy ny famakiana.
1 Iza moa i UGREEN?
2 Inona no atolotry ny UGREEN HiTune X6 antsika
2.1 Fanafoanana ny tabataba mavitrika
2.2 6 mikrô ho an'ny resaka mazava kokoa
2.3 Latency ambany
2.5 mampiaraka mora
2.6 26 ora playback miaraka amin'ny vata fampangatsiahana
2.7 Fanaraha-maso mikasika
2.8 Rano mandeha amin'ny rano
3 Inona no ao anaty boaty
4 Ankafizo ny tolotra
Iza moa i UGREEN?
Ugreen dia iray amin'ireo mpanamboatra kojakoja tranainy indrindra eny an-tsena, mpanamboatra manolotra tariby marobe, charger, HUB, mounts iPhone, adaptatera amin'ny karazana fifandraisana rehetra... vokatra amidiny any amin'ny firenena 100 mahery ary misy mpanjifa maherin'ny 40 tapitrisa maneran-tany .
Fotoana izao dia miloka amin'ny écouteur Wireless ihany koa, tsena amin'ny fitomboana mitohy ary isaky ny mampiditra mpifaninana vaovao.
Miaraka amin'ny HiTune X6 vaovao, ity mpanamboatra ity dia manitatra bebe kokoa ny isan'ny headphone tsy misy tariby izay natolony hatramin'izao. Saingy, miaraka amin'ny zava-baovao manan-danja, satria ity no modely voalohany amin'ity mpanamboatra ity misy rafitra fanafoanana ny tabataba mavitrika.
Noho ity rafitra fanafoanana ny tabataba ity dia afaka mitoka-monina amin'ny tontolo iainantsika tanteraka tsy misy fiantraikany amin'ny sofina amin'ny fanerena hampiakatra ny feo mba hahatratrarana ny fitokanana tadiavintsika.
Inona no atolotry ny UGREEN HiTune X6 antsika
Fanafoanana ny tabataba mavitrika
Ny UGREEN HiTune X6 dia écouteur misy fanafoanana ny tabataba mavitrika, tahaka ny AirPods Pro an'ny Apple.
Noho ny fanafoanana ny tabataba mavitrika dia mahavita ny HiTune X6 esory izay tabataba avy any ivelany izay ahafahantsika mitoka-monina tanteraka amin'ny tontolo iainantsika ka misoroka ny fampihenana ny feo, izay ahafahantsika mankafy ny mozika ankafizintsika amin'ny tontolo rehetra.
Ireo écouteur UGREEN vaovao ireo dia misy mpamily dynamique 10 milimetatra miaraka amin'ny diaphragm DLC izay manome feo tena misy. misoroka ny fanodikodinana famantarana na amin'ny frequences avo na ambany.
6 mikrô ho an'ny resaka mazava kokoa
Ny écouteur manafoana ny tabataba dia maka feo avy any ivelany mba hanafoanana izany mba hahafahanao manao izany esory amin’ny lakan-tsofinay izany. Ny UGREEN HiTune X6 dia misy mikrôfonina 6 amin'ny fitambarany, mikrofona 3 isaky ny sofina tsirairay.
Mikarakara ireo mikrô manasaraka ny feo amin'ny manodidina antsika amin'ny fotoana tena izy mba hanesorana ny feon'olombelona mazava amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny 90% amin'ny tabataba manodidina mba hanomezana antsika kalitao antso avo dia avo raha oharina amin'ny headphone tsy misy tariby hafa tsy misy ity teknolojia fanafoanana ny feo ity.
Ny écouteur Wireless dia tsy mbola noheverina ho safidy tsara hankafizana sarimihetsika na lalao video, noho ny fahatarana. Ny UGREEN HiTune X6 dia mampiditra fomba lalao izay manome fahatarana 50 ms.
Noho ity latency ambany ity, tsy hahatsikaritra karazana fahatarana isika amin'ny feo raha mankafy lalao na sarimihetsika ankafizinay avy amin'ny fitaovanay izahay, na iPhone, iPad, Mac, iPod touch...
Mba hitantana ny famindrana feo, UGREEN dia mampiasa ny 5.1 version an'ny Bluetooth, izay ahafahany manolotra fifandraisana tsy misy tariby milamina kokoa, haingana kokoa ary mifanaraka amin'ny fitaovana iOS sy Android rehetra.
Ankoatra izany, ahitana fanohanana ny ACC sy SBC hanaterana bass lalina be pitsopitsony sy feo avo lenta amin'ny ankapobeny. Farany fa tsy ny kely indrindra dia tokony ho tsaroana fa ity version bluetooth ity dia mandany hery kely kokoa noho ny teo aloha.
Rehefa avy nampifandray ny UGREEN HiTune X6 amin'ny iPhone, iPad na Mac izahay, isaky ny manokatra ny vata famandrihana, hifandray ho azy amin'ny fitaovana ampiarahana farany izy ireo.
26 ora playback miaraka amin'ny vata fampangatsiahana
Ny headphone avy amin'ity mpanamboatra ity dia manana a fahaleovan-tena amin'ny 6 ora playback tsy mampiasa fanafoanana tabataba. Raha ahetsiketsika izany, araka ny filazan'ny mpanamboatra, dia mihena 30 minitra fotsiny ny fizakan-tena, miaraka amin'ny fahaleovan-tena 5,5 ora.
Mampiditra a rafitra mamaly haingana izay ahafahantsika manampy adiny iray fampiasana ny HiTune X6 amin'ny famandrihana 10 minitra fotsiny. Raha tsy maika isika dia ao anatin'ny adiny 1 sy sasany monja dia afaka mahazo azy ireo feno. Mila adiny roa vao feno ny vata fampangatsiahana.
Ny UGREEN HiTine X6 tsy ahitana fanohanana ny fiampangana tsy misy tariby, noho izany dia ho voatery hampiasa ny tariby USB-C tafiditra ao anaty boaty izahay hanaovana izany.
Amin'ny alalan'ny fikasihan-javatra izay mampiditra ny HiTune X6, dia afaka manetsika sy manafoana ny fanafoanana ny tabataba, miato ary milalao mozika, manantona sy mandray antso, mandehana amin'ny hira manaraka na teo aloha ary manetsika ny mpanampy feo.
Raha mitady écouteur ianao hampiharana fanatanjahantena, ny vahaolana natolotry ny UGREEN dia manan-kery tanteraka hatramin'izay misy ny fanamarinana IPX5
Inona no ao anaty boaty
Ny boaty UGREEN HiTune X6 dia misy telo habe ny sofina mba hifanaraka amin'ny sofina ho an'ny mpampiasa rehetra, ny plugs vita amin'ny silikônina izay manome fingotra azo antoka ary hanakana azy ireo tsy hianjera amin'ny hetsika tampoka.
Miaraka amin'ny earbuds, vata fampangatsiahana ary tampons telo habe, dia izy io ihany koa misy tariby USB-C 50 santimetatra ao anaty boaty hampiditra azy ireo sy ny boky fampiasa mahazatra izay atoro antsika ny fomba fampiarahana azy ireo amin'ny fitaovantsika.
El Ny lanjany ambony indrindra an'ny UGREEN HiTune X6 dia 59,99 Euro. SAINGY, manararaotra ny tapakila fihenam-bidy tafiditra sy ny tapakila izahay FIGRH9JB alohan'ny handoavam-bola dia farano ity écouteur manafoana feo ity dia azo vidiana ho an'ny 40,49 Euro.
Mba hanararaotra ny tolotra dia tsy maintsy mampiasa ny tapakila ianao (eo amin'ny pejin'ny vokatra) sy ny kaody izay nasehonay teo amin'ny andalana teo aloha.
Ity promotion ity ihany azo atao ny 17 ka hatramin'ny 23 janoary. Azonao atao ny manararaotra ity tolotra ity ary mahazo écouteur manafoana ny tabataba amin'ny vidiny mirary amin'ny alàlan'ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » UGREEN HiTune X6: écouteur manafoana ny tabataba amin'ny €40,49 fotsiny
Ny AirPods Max amin'ny 415 euros fotsiny amin'ny Amazon
Apple dia hanakatona ny loop amin'ny Apple Silicon amin'ny faran'ity taona ity